Vaovao - Fanjonoana amin'ny fanamboarana vondrona-dranomasina-Zhoushan
Mba hanatsarana ny firaisan-kinan'ny ekipa, hanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny samy mpiasa, hanatsarana bebe kokoa ny fihetsem-po eo amin'ny samy mpiasa, ary hamoronana kolontsaina orinasa tsara sy salama, nandamina ny mpiasa rehetra ny orinasanay mba hanao “asa faly, firaisankina sy fiaraha-miasa, mpisava lalana sy manavao” kalitaon'ny vondrona amin'ny 18 Jolay 2021. Asa atao amin'ny asa fitoriana. Raha ny dinika nifanaovan'ny tsirairay dia napetraka ho ny Nansha Beach, Zhujiajian, Zhoushan ny adiresin'ny hetsika fananganana ekipa.
Zhujiajian dia toerana mahafinaritra eo amin'ny sehatry ny firenena, any atsimo atsinanan'ny Nosy Zhoushan, Faritanin'i Zhejiang. Antsoina koa izy io ho toerana fizahan-tantara lehibe an'ny Putuo Mountain miaraka amin'ny “Haitian Buddha Kingdom” 1,35 kilaometatra avy eo. Io no faritra fizahan-tany fototry ny Nosy Zhoushan, "Telozoro Putuo Golden" Ampahany manan-danja amin'izany ny nosy fahadimy lehibe indrindra ao amin'ny Vondronosy Zhoushan, manana velarana 72 kilometatra toradroa. Tamin'ny taona 2009, nomena isa ho mpizahatany AAAA nasionaly io.
"Shili Jinsha" dia manana endrika fasika tsara, malefaka toy ny lamba firakotra, morontsiraka malemy ary faritra amoron-dranomasina midadasika.
Noho ny morontsiraka volamena, ny ranomasina mafana, ary ny ranomasina manga, dia tsy azontsika fehezina intsony ny faniriana hamihina ny ranomasina.
Any an-danitra dia te-ho lovebird aho, ary tsy maintsy mihinana barbecue amin'ny tany. Ny harivanay, dia nitsoka ny ranomasina teny amin'ny torapasika izahay, nanangana fatana, toto-kena ary nankafy ny divay.
Ny ranomasina dia midadasika, mahatalanjona ary feno. Amin'ity toe-javatra ity, amin'izao fotoana izao, miankina amin'ny lalantsara isika, mijery ny ranomasina, mifampiresaka, mifankahazo sy mifankatia.
Nisy fijinjana lehibe rehefa nanjono tany an-dranomasina, ary feno hazan-dranomasina ireo sambo. Izany no fifaliana amin'ny fijinjana bumper.
Tonga amina famaranana tamim-pahombiazana ny hetsika fananganana ekipa, ary tsy hay lazaina ny fahasambarana sy ny fientanentanan'ny tsirairay.
Amin'ny alàlan'ity hetsika ity dia tsy ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy mpiasa ihany no nohamafisina, fa koa ny maha-zava-dehibe ny andraikitra, ny fiaraha-miasa ary ny fahatokisan-tena no tsapan'ny rehetra. Nilaza ny rehetra fa amin'ny asa ho avy dia tokony hampifangaro ny fanahin'ny firaisan-kina sy ny fanampiana aseho amin'ny hetsiky ny fananganana ekipa amin'ny asan'izy ireo, ary iaraha-miasa mba hanomezana anjara biriky amin'ny fampandrosoana avo lenta an'ny orinasa.